Ezezindlu amafoni yesimanje ngokuvamile kakhulu eyenziwe ngepulasitiki, okungenani - eyinsimbi ngisho akuvamile ngaphezulu esetshenziswa nezinye izinhlobo ezinengilazi. I izikrini futhi ukuvikela ingilazi phezu onobuhle ezibizayo, futhi plastic at eshibhile. abakhiqizi kwihendisethi ozama wenze isembozo ifoni eziqine kakhudlwana futhi iqine, kodwa ukukhulula ifoni ngokuphelele ngeke KLWEBHEKA enamathela akekho oye wakwazi futhi akusiyo losizo nabathengisi. Futhi indlela ofuna efonini yakho bheka esisha kanye ngenyanga, futhi ngemva konyaka ukuthengwa! Futhi enye yezindlela ukuze kulondolozwe ifomu yayo yasekuqaleni is ngokunamathela umzimba kanye nokuvikelwa esibukweni sakhe amafilimu. Okulandelayo uzobe kuchazwe ubuchwepheshe kanjani glue ifilimu efonini ephathekayo.
Le filimu zokuzivikela esikrinini kuyinto zezinhlobo ezimbili - jikelele kanye okukhethekile hlobo locingo ifoni. Izinketho best ukunikeza ifilimu yohlobo wesibili, ngoba kakade has ukuma efiselekayo, futhi ungenayo into ukuthena. Uma namanje wathenga ifilimu jikelele, ngaphambi kubalulekile ukusebenzisa ilebula esikrinini waquma wonke sikelo abukhali ezingadingekile.
Okokuqala screen yefoni zigezwe kusukela izintuli nokungcola. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa wangaphandle kanye ekhethekile ketshezi yokuhlanza usula izikrini, lokhu akufanele kube kuvela noma yiziphi izingqinamba, futhi enye into - like glue? Glue ifilimu ocingweni ngezigaba ezimbili: okokuqala, ungqimba wokuqala zokuzivikela isuswe, okwembula ebusweni ingcina, futhi ifilimu sisetshenziswa efonini esibukweni. Kulesi sigaba, okubaluleke - unamathele enamathela ngokulinganayo saxosha zonke Bubbles, lokhu kungenziwa nge-credit card. Uma anamatheliswe ifilimu njengoba oyifunayo, kungenzeka ukususa ungqimba yesibili zokuzivikela. Manje ifilimu iduduzekile, futhi uyovikela isikrini kusuka ekuklwebhekeni.
Indlela ukunamathisela ifilimu ocingweni, uma ufuna ukuvikela umzimba wakhe ekulimaleni? Kulokhu omunye umhlabeleli zalo nokunamathisela carboxylic ifilimu. Njengoba carboxylic glue ifilimu ocingweni? Lona umbuzo abantu abaningi ababhekene nezimo nenkinga efanayo okokuqala. On umbuzo kanjani ukunamathisela ifilimu ocingweni, kungaba izihloko eziwusizo kakhulu phezu nokunamathisela we ifilimu imoto, kodwa kukhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Uzodinga ifilimu carbon, kanye ngokubhala ummese, umshini wokomisa izinwele, kuphela. Degrease nge kuphela, wayefisa cut ucezu ifilimu ngemajini nxazonke. Kungcono namathisela phezu imininingwane yefoni eyodwa uma umzimba wayo egoqekayo. Gluing, ukushisa eguqa ifilimu hairdryer - ngakho-ke iba nokunwebeka, futhi kungaba ukudonsa. Le filimu qiniseka Tuck ngaphansi into, noma luyofika unstuck. Liphinde isimo kubalulekile fining ukususwa air Bubbles sisuke ngaphansi kwawo, wonke ikhadi efanayo plastic ingasetshenziswa le njongo. Qaphela ukuba uvale imakhrofoni ifilimu futhi izimbobo isipika ukunamathisela umzimba, kanye izinkinobho Jacks ifoni.
Ngokusebenzisa le technology, ungakwazi kalula unamathele ifilimu ku-iPhone kanye nanoma yimiphi eminye imodeli iselula. Elingenamikhono ifilimu uzobuyisa the look wokuqala efonini yakho, futhi uma imihuzuko ifilimu ubudala kungaba ngokushesha futhi asuse ukuba induku entsha benganakwa muntu.
Indlela ukushaja ifoni ngaphandle ukushaja?
Indlela ukubuyisela i-SIM khadi
Izinhlanga ku-salat: incazelo, izici. Bangaki amakhiya emthandazweni ngamunye?